काठमाडौं महानगरको नतिजाले प्रकाशमानलाई धक्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पार्टी महाधिवेशनको दाउपेच स्थानीय चुनावमै प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर
जेष्ठ १४, २०७९ कलेन्द्र सेजुवाल
काठमाडौँ — कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समितिले वैशाख ७ मा नगर प्रमुखका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा नीलकाजी शाक्य र पाँचौं नम्बरमा प्रगतिमान रन्जित थिए । पार्टीको गत असोजमा सम्पन्न नगर अधिवेशनमा सिंह समूहमा रहेका शाक्य अर्को समूहका रन्जितलाई पराजित गरेर महानगर सभापति बनेका थिए ।
काठमाडौंको राजनीतिमा सिंहको बलियो पकड छ । करिब दुई दशकयता पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन होस् वा आमनिर्वाचन, सिंहको रुचिभन्दा बाहिर गएको छैन । त्यसैले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा सिंह–पत्नी सिर्जनाले टिकट पाउँदा विरोधको स्वर बाहिर कतै सुनिएन तर नेता–कार्यकर्ताको मनभित्र गुम्सिएको असन्तुष्टिले चुनाव हराउन भने भूमिका खेल्यो । ‘उहाँ (सिंह) माथि आफ्नो वरिपरिका कार्यकर्तालाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो, यस पटक श्रीमतीलाई मेयरको टिकट दिलाएर थप असन्तुष्ट बनाउने काम गर्नुभयो,’ काठमाडौं कांग्रेसका नेता हरिहर अधिकारी भन्छन्, ‘सायद यही कारण महानगरमा कांग्रेसको अवस्था मजबुत हुँदा र गठबन्धन दलको समर्थन पाउँदा पनि चुनावको नतिजा गलत आयो ।’ पार्टीको गत महाधिवेशनमा जिल्ला र स्थानीय तहमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि असर पारेको उनले बताए ।
अधिकारीका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र (बालेन) साहप्रतिको माहोल हारको प्रमुख कारण होइन । बरु उम्मेदवारी तय गर्दा जनता र कार्यकर्ताको रुचि ख्याल गर्न नसक्नु हारको आधारविन्दु हो । कांग्रेसका नगर प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले पाएको मतको विश्लेषण गर्दासमेत अधिकांश कांग्रेसी मतदाताले प्रमुखमा आफ्नै दललाई मत नदिएको देखिन्छ । ३२ वडा रहेको महानगरमा कांग्रेसले १९ वडाध्यक्ष जितेको छ । सबै वडाका वडाध्यक्ष (वडा नं. ३२ मा वडाध्यक्ष नहुँदा खुला सदस्य) उम्मेदवारले ६७ हजार ९ सय ९१ मत पाएका छन् । नगर प्रमुखमा भने श्रेष्ठले ३८ हजार ३ सय ४१ मत मात्रै पाएकी छन् । ‘यति ठूलो मतान्तर हुनुले कांग्रेसको मेयर उम्मेदवार र उम्मेदवार तय गर्ने नेतृत्वप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसले स्वाभाविक रुपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने सिंहलाई धक्का लागेको छ ।’
श्रेष्ठलाई सबैभन्दा पहिले नेपाल महिला संघ काठमाडौं कार्यसमितिले नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका अन्य भ्रातृ संस्थाले सोही निर्णयलाई बल पुग्ने गरी श्रेष्ठको पक्षमा पार्टीभित्र जनमत निर्माणको काम गरेका थिए । यी काम नेता सिंहको इसारा र रुचिमा भए पनि उनी बेखबरझैं देखिन्थे । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं कांग्रेसभित्र सिंहको रुचिविरुद्ध जाने अवस्था छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सिंहकै रुचिअनुसार श्रेष्ठलाई टिकट दिन सकारात्मक भएका थिए । देउवा श्रेष्ठप्रति सकारात्मक हुनुका प्रमुख दुई कारण थिए । पहिलो– काठमाडौंमा नेता सिंहको इच्छाविपरीत अर्को व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा हार्ने जोखिम हुनु, दोस्रो– श्रेष्ठलाई टिकट दिँदा नेता सिंह आफूप्रति थप निकट हुने अवस्था बन्नु । ‘त्यसैले सिर्जना (श्रेष्ठ) जीको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै सभापतिले अन्य आकांक्षीलाई निराश बनाइसक्नुभएको थियो,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आखिर टिकट पनि निर्विवादजस्तै पाउनुभयो तर परिणाम उल्टो भइदियो ।’
पत्नी सिर्जनालाई जिताएर सिंह काठमाडौंको राजनीतिमा थप बलियो हुन चाहन्थे । यसबाट उनले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीति पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका थिए । सिर्जनाले जितेकी भए देउवा–सिंह सम्बन्ध पनि थप गाढा हुने निश्चित थियो । पराजयले सिंहलाई काठमाडौंको आमराजनीतिमा धक्का लाग्नुका साथै पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट काठमाडौं महानगर प्रमुखमा उम्मेदवार रहेका सिंहनिकट नेता राजुराज जोशी विरोधीका लागि यो निर्वाचन आलोचनाको अस्त्र बनेको बताउँछन् । ‘सिर्जनाजी मेयरको उम्मेदवार हुनका लागि योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अर्को व्यक्ति उम्मेदवार भइदिएको भए पनि बालेनको बहाबलाई रोक्न गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर उहाँ (सिंह) का विरोधीहरूले श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाएका कारण पार्टी पराजित भयो भन्न पाउने भए ।’
नेता अधिकारी यही कारण आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत सिंहलाई असजिलो हुने बताउँछन् । सिंह काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट चुनाव लड्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रमा महानगरका वडा नं. १०, ११, २९ र ३१ पर्दछन् । यी वडाको मत परिणामले सिंहलाई पनि झस्काएको छ । चारवटै वडामा कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ८ हजार १ सय ६६ मत ल्याउँदा नगर प्रमुखमा कांग्रेसकी श्रेष्ठले ६ हजार ८ सय १६ मत ल्याएकी छन् । चारवटा वडामध्ये तीनवटामा कांग्रेस र वडा नं. ३१ मा एमालेका वडाध्यक्ष विजयी भएका छन् । बानेश्वर क्षेत्र (वडा नं. १०) मा त कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार रामकुमार केसीभन्दा श्रेष्ठको मत झण्डै आधा कम छ । ‘यसरी उहाँ (सिंह) कै क्षेत्रमा कांग्रेसका मतदाताले अन्यत्र मतदान गर्ने अवस्था आउने हो भने भोलिको चुनाव थप जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसपटकको चुनावले काठमाडौंमा कांग्रेसलाई भन्दा बढी धक्का उहाँलाई पारेको छ ।’
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिंहले तेस्रो नम्बरमा परेपछि दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन गरेका थिए । त्यसयता देउवा–सिंह सम्बन्ध न्यानो बन्दै आएको छ । यही सम्बन्धको कारण काठमाडौंमा श्रेष्ठलाई टिकट पाउन सहज भएको थियो । तर वर्षौंदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई टिकट दिनुको साटो श्रीमतीलाई टिकट दिँदाको परिणामले सिंह नैतिकताको प्रश्नले घेरिएका छन् । ‘भविष्यमा यही प्रश्नले उहाँलाई कमजोर बनाउँदै लग्नेछ,’ कांग्रेस नेता अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने नेता (गणेशमान सिंह) को परिवारकै सदस्यहरू पदलोलुप भएको आरोपले पनि असर पार्नेछ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०७:१५
रियल म्याड्रिड कीर्तिमानी १४ औं पटक च्याम्पियन बन्ने होडमा हुँदा लिभरपुल बदला लिने दाउमा हुनेछ
जेष्ठ १४, २०७९ एएफपी
लिभरपुल — योर्गन क्लोप भन्छन्, ‘हामी त्यसै युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेका होइनौं, यसमा जादु छैन । हामी यसका लागि हकदार छौं ।’ स्टाडे डे फ्रान्समा शनिबार हुने फाइनलमा लिभरपुलको बाटोमा चुनौती तेर्साएर बसेको हुनेछ रियल म्याड्रिड । चार वर्षअगाडि पनि लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग खेलेको थियो । क्लबका गुरु थिए तिनै क्लोप । किभमा सम्पन्न उक्त फाइनलमा लिभरपुल उही रियलसँग ३–१ ले पराजित रह्यो ।
त्यसमा गोलरक्षक लोरिस कुरियसले दुई ठूला गल्ती गरे अनि मोहम्मद सलाह चोट बोक्दै चाँडै मैदान छाड्न बाध्य रहे । क्लोप त्यो खेल सम्झेर अहिले भन्छन्, ‘त्यो रात हाम्रा लागि खुबै पीडादायी रह्यो ।’
तर त्यसको एक वर्षपछि नै लिभरपुलका लागि खुसी फर्केको थियो । म्याड्रिडमा भएको खेलमा लिभरपुलले टोटेनहमलाई हराएर छैटौंपल्ट च्याम्पियन्स लिग जित्यो । त्यो फाइनलका लागि लिभरपुलले आफ्ना सबै समस्या सच्याएको थियो । त्यसपछि त क्लोपले लिभरपुलको लिग उपाधिका लागि ३० वर्षको पखाईमा पनि पूर्णविराम लगाए । सन् २०२० मा लिभरपुल इंग्लिस प्रिमियर लिग जित्न पनि सफल रह्यो । लिभरपुल आएबित्तिकै क्लोप भन्थे, ‘यदि म लिभरपुलमा चार वर्ष रहें भने कम्तीमा एक उपाधि जित्नेमा म विश्वस्त छु ।’
अहिले त्यसो भनेको पनि ७ वर्ष भइसक्यो । अहिले तत्काल लिभरपुल एकै सिजन तीन ठूला उपाधि जित्ने संघारमा छ । त्यसमध्ये लिग कप र एफए कप त जितिसकेको छ । शनिबार फाइनल खेल लिभरपुलले यो सिजन खेल्ने ६३ औं खेल हुनेछ । त्यसको अर्थ लिभरपुलले आफू सहभागी सबै प्रतियोगिताको अन्तिम खेल खेलेको छ । घरका दुई कप जिते पनि लिरभपुललाई इंग्लिस प्रिमियर लिग जित्न म्यानचेस्टर सिटीले रोकेको थियो । व्यवस्थापक क्लोप भन्छन्, ‘च्याम्पियन्स लिग सफलताविना पनि हाम्रा लागि यो सिजन राम्रो रहने छ । यदि हामी च्याम्पियन्स लिग जित्न सक्यौं भने हाम्रा लागि यो सिजन वास्तवमै उत्कृष्ट रहनेछ ।’
लिभरपुलको यो यात्राको श्रेय उनै क्लोपलाई मात्र जान्न । यसका लागि धेरैलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये एक हुन्, क्लब छाड्न लागेको स्पोर्टिङ डाइरेक्टर मिचेल एडवार्ड्स । उनले ट्रान्सफर मार्केटमा खुबै मज्जाले खेल्दै एकपछि अर्को उत्कृष्ट खेलाडी अनुबन्ध गर्न मदत गरेका छन् । लिभरपुलको यो सफलतामा खेलाडीको योगदान त झन कसरी बिर्सन सकिन्छ र ? पूर्व खेलाडी जिमी कारिघर भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो श्रेय त खेलाडीलाई नै जान्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘तर लिभरपुलको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा त्यस्ता व्यवस्थापक छन्, जसलाई विशेष मान्न सकिन्छ ।’
लिभरपुल सम्हालेयता क्लोपले ६ ठूला उपाधि जितिसकेका छन् । यदि यस बाटोमा लिभरपुललाई बाधा तेर्स्याउने पेप ग्वार्डिओलाको सिटी नभएको भए अझ के के हुन्थ्यो, त्यो कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । क्लबका पूर्वकप्तान स्टेफेन जेरार्डले ठीकै भनेका छन्, ‘क्लोप त्यस्ता फुटबल प्रशिक्षक हुन्, जसलाई लाखौंमा एक पाइन्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०६:५३